स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भए पनि देउवासहित नेताले किन दिए उम्मेदवारी? :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भए पनि देउवासहित नेताले किन दिए उम्मेदवारी?
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेल्धुराबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
देउवाले मञ्जुरीनामाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
डडेल्धुरामा सोमबार सातौं जिल्ला अधिवेशन र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको थियो।
यसपालि डडेल्धुरामा जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ललगायत उनी पक्षले वडादेखि नै अधिवेशनमा भाग लिएका छैनन्, सभापति देउवा पक्षले 'एकलौटी' अधिवेशन गरेको छ।
सभापति देउवाको उम्मेदवारी २० नम्बरमा थियो। उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि खुल्ला पुरूषतर्फ उम्मेदवार थिए। देउवाले खसेकोमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका थिए।
कांग्रेस नेतासमेत रहेकी देउवाकी पत्नी आरजु राणा पनि डडेल्धुराबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकी छन्। आरजु खुल्ला महिलातर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार बनेकी थिइन्। आरजु निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकी हुन्।
सभापति देउवामात्र होइन, कांग्रेसका अरू शीर्ष नेता पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार भइरहेका छन्। देउवानिकट रहेका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि उठेका छन्।
सुर्खेत पुगेर महामन्त्री खड्काले आज महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उनले खुल्ला पुरूष महाधिवेशन प्रतिनिधितर्फ उम्मेदवारी दिएका हुन्।
कांग्रेस विधानअनुसार पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य (आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यबाहेक) स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
कांग्रेस विधानको परिच्छेद ६ मा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिबारे व्यवस्था छ। जसको (ग) नम्बरमा निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य एक अवधिका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भए पनि सभापति देउवा, महामन्त्री खड्का तलबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन चाहेको देखिन्छ।
कांग्रेसले विधान बनाउँदा केन्द्रीय सदस्य क्रियाशील सदस्य रहेकै क्षेत्रबाट निर्वाचन भएर आउनुपर्ने र स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद थियो।
त्यसबेला सभापति देउवा, महामन्त्री खड्कालगायत तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्नेमा थिए। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले यो व्यवस्था राख्ने भए 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने चेतावनी दिएका थिए।
त्यसबेला आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भने तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका लागि फरक-फरक व्यवस्था गरिएको भन्दै आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमै सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था रहेको बताए। तर नेताहरू तलबाट निर्वाचित भएर आउन चाहे त्यो पाउने उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमै छ। तर कोही नेताले म तलैबाट निर्वाचन जितेर आउँछु भन्नुभयो र उम्मेदवारी दिनुभयो भने त विधानले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि उठेर आउन सक्ने बताए।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन केन्द्रीय सदस्य तलबाट निर्वाचित भइरहनु त पर्दैन तर कोही कसैले निर्वाचित भएर आउँछु भन्छ भने पाउने भयो,’ शर्माले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ७, २०७८, ०२:३३:००
तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले केएमसी कलेजमा लगाए ताला